Barnoota: Yunivarsiitiin Finfinnee kitaabilee Afaan Oromoo hin maxxansuu? - BBC News Afaan Oromoo
Barnoota: Yunivarsiitiin Finfinnee kitaabilee Afaan Oromoo hin maxxansuu?
Barnoonni Afaan Oromoo Yunivarsiitii Finfinnee keessatti akka 'maayinariitti' A.L.I bara 1987, digirii jalqaban ammoo bara 1995 kennamuu jalqabe.
Yunivarsiitichi erga waggaa saddeeti as digirii lammataan waggaa lamaa as ammoo digirii sadaffaan Afaan Oromoo barsiisaa jira.
Haata'u malee, kitaabolee barnootaafi waabii akka ta'an barsiisonni Afaan Oromoo maxxansiisuuf dhiyeessan manni maxxansaa yuunivarsiitichaa fudhachaa hin jiru jedhu barsiisonni.
Yunivarsitiin Baahirdaar afaan Oromoofi Gi'iizii barsiisu eegaluuf
Rakkoolee manneen barnootaa Afaan Oromoo magaalaa Finfinnee
Hogganaa Muummee Afaan Oromoo yuunivarsiitichaa kan turan Dr Xilaahun Taliilaa waahila isaanii barsiisaa Seeraa Dr Taaddasaa Leencoo waliin kitaaba walaloo waloo Zalaalam Abarraa 'Obonboleettii' jedhu qabatanii gara mana maxxansaa yuunivarsiitichaa deemuu nutti himan.
"Akka barsiisaa Og-barruu tokkootti faayidaa kitaabichi barattootaaf qabu waan itti amanneef gara mana maxxansichaa geessine," jedhu Dr Xilaahun.
Haata'u malee, "yeroo achi geenyu waan nuti hin eegnetu nu mudate," jedhan.
Haga sanitti yuunivarsiitiin caasaa jiru hundumatti Afaan Oromoo simatee hojjataa jira kan jedhudha kan hundi keenya beeknu jedhu.
"...seerri hanga fooyya'uutti"
Iddoo sanitti garuu Afaan Oromoon kitaaba maxxansiisuun akka hin danda'amne, kan hin danda'amnees waa lamaaf akka ta'e nutti himame jedhan.
"Tokko, kitaabota akka kanaa kalaqa dhunfaa ta'an hin maxxansinu kan jedhuudha."
"Lammaffaan immoo hamma seerri fooyya'utti kitaaba Afaan Oromoo hin maxxansinu kan jedhu nuuf kaase daayireektarri mana maxxansichaa" jedhu Dr. Xilaahun.
Akka muummee Afaan Oromootti yuunivarsiitiin caasaa jiru keessatti hammam nu beekaa kan jedhu dabalatee gaafiiwwaan tokko tokkoo fi wanta hojjatamuu qaban irratti mari'ataa turre jedhu.
Afaan Oromoon kitaaba maxxansuun yoom jalqabama kan jedhu gaaffii kaafnee, "fuldura seerri kun akka fooyya'u boordiitti dhiheessinee eega fooyya'e booda ta'a kan jedhurratti walii galle" jedhu barsiisaan Og-barruu kun.
Haa ta'u male seerri mana maxxansichaa kitaaba Afaan Oromoo maxxanfamuu dhorka jedhame boordiittis hin dhiyaanne, hin fooyyofnes.
Tibbana yuunivarsiitichatti koorsii 'Afaan Oromoo akka Afaan dhalootaatti' jedhu kan barsiisaan Dr Tolamaariyaam Fufaa rakkoon wal fakkaataan akka isaan mudate BBC'tti himaniiru.
Qormaata kutaa 12ffaa irratti ejjennoo Naannoo Oromiyaa
Kitaaba barnootaa yookiin 'Text book' ulaagaa hunda guuttate maxxansiisuuf gara mana maxxansaa yuunivarsiitichaa deemanis "maxxansuu hin dandeettu naan jedhani" jedhu.
"Ani seera isaa eegeen kitaaba kana gara mana maxxansaa yuunivarsiitichaatti geesse" jedhu Dr Tolamaariyaam.
Haal dureen barbaachisu maali?
Akka seera yuunivarsiitichaatti barsiisaan koorsii barsiisu tokkoof kitaaba barnootaa qopheessee gara mana maxxansaa yuunivasriitichaa geessa jedhu.
"Gaafa kitaaba kana naa maxxansaa jettee qabattee deemtu kitaaba san nama lamaan gulaalchisu qabda. Namni tokko namuma yuunivarsiitii keessaa filatame yoo ta'u inni lammaffaan immoo nama alaa ta'u qaba."
Waan hunda qopheessanii erga xumuranii booda daayireektara mana maxxansaa bira deemanii gaafatanis didamuu dubbatu Dr Tolamaariyaam.
"Kitaaba qopheesseen jiraa, Afaan Oromoo mooraa kana keessatti digirii jalqabaa hamma digirii sadaffaa ni barsiifamaa ta'us garuu kitaabni barattoonni ittiin baratan hin jiruu kanaaf naa maxxansiisaa jedheen gaafadhe" jedhu.
"Osoo maxxansinee ni jaallannaa, haa ta'uu malee seerri mana maxxansichaa Afaan lama qofaan akka maxxanfamu kan inni hayyamu- Afaan Ingiliiziifi Afaan Amaaraati naan jedhan."
"Seerri Afaan Oromoo akka maxxanfamu jedhu hin jiruu kanaaf Afaan Oromoo seeraan waan dhorkameef hin danda'muu naan jedhani," jedhu Dr Tolamaariyaam.
Dayireekatara mana maxxansichaa Dr Ballaxaa Buzuneh irraa deebiin argatan akkuma kanaan duraa boordiitti ni dhiyeessina kan jedhu akka ta'e himu.
"'Ani gamakoon boordiitti isiiniif dhiheessuu nan danda'aa. Boorditti dhiheessuuf immoo ji'a afurii hamma ji'a shanii fudhata,' naan jedhan, deebiin kun baay'ee na dallansiisnaan deebi'e" jedhu Dr Tolamaariyaam.
Madda suuraa, ADDIS ABABA UNIVERSITY
Seerri yuunivarsiitichaa Afaan Oromootiin akka hin maxxansine hin dhorku jedheen amana jedhu Dr Xilaahun.
"Akkas ta'uu hin qabu. Rakkinni rakkoo mana maxxansichaati malee kan seera yuunivarsiitichaatii miti" jedhu.
"Yuunivarsiitiin seera ittiin bulmaataa mataasaa qaba. Seerri mana maxxansaa sun seera yuunivarsiitiitiin olii miti. Warri kutaa sanis ta'ee muummeewwan biroo akkaatuma seera yuunivarsiitii sanitti of mijeessuun tajaajila kennuu qabu malee kan kiyya hamman fooyyessutti jechuu hin qaban yoo qaama adda addaa ta'an malee."
"Kun rakkoodhuma kutaan sun addatti of mijeessuu dhabuufi namoota fedhii dhuunfaa geggeessan waan keessa jiraniif kan jedhudha akka dhuunfaatti yaanni ani fudhu" jedhu.
Hamma ammatti hoo kitaabileen barnootaa eessatti maxxanfamanii barattoota bira gahaa turan jedhee gaafii BBC'n gaafateef "Eessa jira? Kitaabni hin jiru" jedhu Dr Tolamaariyaam.
Kanaan dura kitaaba barsiisuuf gargaaru yookiin 'Teaching material' yuunivarsiitii keessatti maxxansiisanii akka turan dubbatu.
"Sun garuu kitaaba barnootaa miti. Mana maxxansaatiif osoo hin taane daayireektarii qorannootiif dhiheesse isaan naa maxxansan" jedhu.
Manni maxxansichaa kan maxxansiisuu dide kitaaba barnootaati. Mana maxxansaarraa gargaarsa waan hin arganneef ofii kiyyaa asiin dura alatti maxxasiiseera jedhu Dr Tolamaariyaam.
Barsiisoonni kaka'umsa isaaniitiin mooraa yuunivarsiitichaatiin alatti maxxansiisanii barattootaaf akka qopheessaa turan Dr Xilaahun BBC'tti himaniiru.
Kitaabbileen barattoonni itti fayyadaman kitaabilee mana maxxansaa adda addaatti maxxanfamaniidha jedhu.
Daayireektarri mana maxxansaa yuunivarsiitii Finfinnee Dr Ballaxaa Buzuneh garuu Afaan Oromoo kan maxxansuu didaniif sababa seerri dhorkuuf akka hin taane BBC'tti himan.
"Kaleessa barsiisaan tokko kitaaba barnootaa Afaan Oromootiin qopheesseeraa naa maxxansaa jedhee na bira dhufusaa nan yaadadha. Ammatti garee keenya keessatti namni Afaan Oromoo danda'uu hin jiru, humnas hin qabnu," jedhan.
"Kanaaf yeroo murtaa'eef akka na obsitun jedheen," jedhu Dr Ballaxaan.
Bara darbe akka maxxanfamu gaafatamne kan dhorkine garuu kitaabaa og-barruuti malee kitaaba barnootaa miti jedhu.
Manni maxxansichaa immoo kitaaba barnootaa qofa maxxansa jedhu Dr Ballaxaan.
28 Caamsaa 2018
Afaan Oromoo: Gulantaan barnootaa jijjiirame Afaan barnootaa ni jijjiiraa?
'Achi buutee ijoollee keenyaa nu beeksisaa'- maatii Somaaliyaa